पोर्न स्टारहरुको जीवन कस्तो हुन्छ र कति कमाउँछन् ? महिनाको तलब पाउछन् कि सेक्स गरेको हिसाबले?? « Kathmandu Television HD
पोर्न स्टारहरुको जीवन कस्तो हुन्छ र कति कमाउँछन् ? महिनाको तलब पाउछन् कि सेक्स गरेको हिसाबले??
पोर्न स्टारको यस्तो हुन्छ शेड्युल – दैनिक शेड्युल बिहान ६ बजेबाट सुरु हुन्छ । उनीहरुलाई ६ बजे सुटकेस तयार गर्न लागाइन्छ । – १० बजे कारमा बसिसको हुन्छन् । उनीहरु आधा घण्टा अगाडि सेटमा पुग्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरु ११ बजे अघि सेटमा पुग्नपर्छ । – ११ बजे पेपरवर्क सकेपछि डेढ घण्टामा हेयर र मेकअप हुन्छ । – १२ बजे सोलो फोटोशुट गराइन्छ । जसमा लगभग १ घण्टा लाग्छ । – दिउँसो १–२ बजे मेल पोर्न स्टार आइपुग्छ । र, पेपरवर्क कम्पलिट गर्छ । यसबीच क्रु लाइट्सको एरेञ्जमेन्ट हुन्छ । – २ बजे पोर्न स्टार महिला र पुरुषबीच चिनजान र भिडियोशुट हुन्छ । सिचुएशन र सेटअपका हिसाबले लगभग २ घण्टा लाग्छ । – ४ बजे मेल र फीमेल पोर्न स्टारलाई सेक्स गराइन्छ । र, फोटो खिचिन्छ । – ६ बजे मेल र फीमेल पोर्न स्टारको भिडियोशुट हुन्छ । – ७ बजे अगाडि भिडियोका शोफ्टकोर लिइन्छ । यसमा करिब डेढ घण्टा लाग्छ । – ६ ः १५ अगाडि फ्रि भएमा उनीहरुलाई पेमेन्ट दिइन्छ अर्थात पोर्न स्टार्स चेक लिएर जान्छ । उनीहरुलाई एक साताको म्याद राखेर चेक दिइन्छ । निर्माता सिरीका अनुसार मेल र फीमेल पोर्न स्टारको कमाइमा धेरै अन्तर हुन्छ । यहाँ फीमेलले मेलको भन्दा धेरै पैसा पाइन्छ । एजेन्सी
जर्मनीवाट दिपक धिताल जर्मनी । जर्मनीमा अहिले ०.६५ प्रतिशत छ । यो भनेको १०० जना संक्रमितले